Qaasim Suleymaani Waa Noolyahay Ma Dhiman !! | Xaqiiqonews
Qaasim Suleymaani Waa Noolyahay Ma Dhiman !!
Diyaarad drone ah oo Mareykanka leeyahay ayaa duqeyn ku dishay Janaraaal Suleymaani hase haate taageerayaasha Suleymaani ayaa Suleymaani ku sifeeyey in uu yahay “mid wali nool”.
“Ma ahan jir dhulka lagu aasayo oo fikradiis sidaasi ay ku dhamaaneyso waxa uu ahaa injineer kala waday holwgalada lagu maalgelinaayo kooxaha muqaawamada ee Iiraan taageertso sida Xisbulaahi, Xamaas iyo Xuutiyiinta” erayadaasi waxa ay ku jireen maqaal baroor diiq ah oo taageerayaasha Suleymaani ku baahiyeen warbaahinta.
Sidoo Kale Aqri..Xogtii Ugu Horeysay..Ninkii Trump Ku Qalqaaliyey Dilkii Suleymaani
Marka laga soo tago taageerayaasha Iiraan, Dika Suleymaani waxa uu Mareykanka iyo xulafadiis uga dhigan yahay “guul la taaban karo”.
Dhanka kale Madaxweyne Trump oo ka hadlay duqeyntii Iiraan ee xeryaha Mareykanka ayaa sheegay in Xaalka uu yahay “mid caadi ah” isla markaana Iiraan iyo Mareykanka ay leeyihiin hal cadow, loona baahanyahay in labada dal heshiiyaan.